Atleetonni keenya fiigicha Ispeen, Jaappaanii fi Turkitti geggeeffame injifannoon xumuran - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Atleetonni keenya fiigicha Ispeen, Jaappaanii fi Turkitti geggeeffame injifannoon xumuran
Atleetonni keenya fiigicha Ispeen, Jaappaanii fi Turkitti geggeeffame injifannoon xumuran
Fiigicha fageenya km 9 IAAF Cross Country Atapuerca’tti, Ispeen, geggeeffame atleet Imaanaa Margaa daqiiqaa 25:02 galuudhaan injifate. Imaanaa Margaa dirree Atapuerca irratti wolmorkii kana kan moo’ate, wolitti aansee, si’a shaniif. Imaanaan Atapuerca’tti abbaa fiigicha km sagalii ta’uu isaa mirkaneesseera.
Fiigicha erga ol’aantummaan goolabee boodaa, ‘Bakka kanatti si’a shaniif wolitti aansee moo’achuu kootiif baay’een gammadeera, ‘ jedhe Imaanaa Margaa.
Timothy Toroitich, Yugaandaa irraa, 2ffaa ta’eera.
Achuma Atapuerca, Ispeenitti, woldorgommii dubartoota jiddutti geggeeffameenis kan moo’atan atleetota keenya. Atleet Balaaynesh Oljiraa fi Alamituu Heroyyee 1ffaa fi 2ffaa ta’uudhaan badhaasa meedaaliyaa argataniiru. Balaayneshii fi Alamituun wolmorkii kana wolduraa duubaan daqiiqaa 24:52 fi 24:56’n kan xumuran. Woldorgommii taasifame booda yaada gaazexeessitootaaf laatteen, ‘Har’a haala gaaritu natti dhagayame. Haalli qilleensaas isa woggaa darbee irra bayeessa ture, ‘ jette Balaaynesh Oljiraa.
Gama biraatiin, fiigicha Saitama International Marathon, Jaappaanitti adeemsifameen Atsadee Baayyisaa moo’achuu dandeetteerti. Sa’aa 2:25;44’tti wolmorkii geggeeffame xumuruudhaan Atsadeen kan injifannoo gonfatte. Dirree Saitama irratti atleetonni Itoophiyaa woggaa sadan darbaniif moo’achuu hin dandeenye ture. Galata Astadee Baayyisaa, bara kana haalli suni geeddarameera.
Dilbata kaleessaa fiigichi maaraatoonii Istaanbulitti, Turk, geggeeffamee ture. Achittis dirree fiigichaa irratti ol’aantummaa qaban kan addunyatti mul’isan atleetotuma keenya. Amaanee Goobanaa, Vodafone Istanbul Marathon, sa’aa 2:31;54’tti raawwachuudhaan haadha worqee taateerti.
Woggaa dabres maaraatoonii Istaanbul kan moo’atte Amaanee Goobanaa turte. Barana injifannoo kana harka isiitii baasuuf yaaliin guddaan taasifamus, Amaaneen, morkattoota isii hunda ufirraa faccisuudhaan injifannoon kuni harkuma isii akka turu gooteerti.
Injifannoo boonsaa argattanitti hunduu baga gammaddan!
Previous articleHaleellaa magaalaa Paariis irratti geggeeffameen namoonni 129 du’anii 300 oli madoo ta’an
Next articleFinfinnee keessatti lafti meetir iskuweerii 242 qarshii miliyoona 86’tti gurguramte